जहिले सहज हुन्छ - आउँदा हुन्छ, सधैँ स्वागत छ : ईश्वर पोखरेल
नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीलाई गतिहीन बनाइरहने प्रयत्नलाई स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् ।
मंगलवार राति पोखरेलले एक ट्वीट गर्दै पार्टी आफ्नै गतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्दै यसमा सामेल भएर योगदान गर्न आउनेलाई स्वागत रहेको समेत बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्,'पार्टी गतिहीन भएर रहन सक्तैन । आफ्नै गतिका साथ अगाडि बढ्छ, बढिरहन्छ ! यसको गतिमा सामेल भएर योगदान गर्न आउनुहुने सबै साथीहरूलाई स्वागत छ ! जहिले सहज हुन्छ - आउँदा हुन्छ , सँधै स्वागत छ ! तर जुनसुकै कारणले पार्टीलाई गतिहीन बनाइरहने प्रयत्नलाई स्वीकार्न सकिन्न !'
पार्टी गतिहीन भएर रहन सक्तैन । आफ्नै गतिका साथ अगाडि बढ्छ, बढिरहन्छ ! यसको गतिमा सामेल भएर योगदान गर्न आउनुहुने सबै साथीहरूलाई स्वागत छ ! जहिले सहज हुन्छ - आउँदा हुन्छ , सँधै स्वागत छ ! तर जुनसकै कारणले पार्टीलाई गतिहीन बनाइरहने प्रयत्नलाई स्वीकार्न सकिन्न !
— Ishwar Pokhrel (@IshwarPokhrel) August 3, 2021
वैशाखसम्म सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने यो...
कांग्रेसका मन्त्रीले वडाध्यक्ष कुटेको विरोधमा उत्रिए ...